Project Engineer | Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. ﻿
•	Operation ပိုင်း Technical ပိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။
•	Engineering Management ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာ၍ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍ သွက်လက်တက်ကြွသူဖြစ်ရပါမည်။
•	AutoCAD 2D/3D ကြှမျးကငျြရမညျ။
•	Computerကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျသူ ဖွဈရပါမညျ။
•	အသကျ ၃၅နှဈအထကျ ဖွဈရပါမညျ။
•	Computerကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	အသက် ၃၅နှစ်အထက် ဖြစ်ရပါမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅) နှစ်အထက် ရှိရပါမည်။
•	လုပ်ငန်းခွင် Site အချိန်ဇယားများကို Phase အလိုက် Plan ချခြင်း၊ Estimate တွက်ချက်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးထားသော Project များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းပေးပါမည်။
•	M.E / B.E (Civil)ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမည်
•	Age Between - 40 to 50
Project Engineer Engineering & Technical Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon